Uthando nomhawu ngokuvamile kuvamise ishalofu elilodwa, futhi lokhu kuyiqiniso: umhawu ngenxa yothando - uhlobo olulodwa lomhawu oluvumela ukuba ubonise ngokucacile zonke izimangalo zabo nokucasuka komuntu othandekayo. Kulesi sihloko, sizohlola ukuthi hlobo luni lwabesifazane oluhlobene nomhawu nokuthi basabela kanjani kulo.
Umhawu kuyinto ukuhlambalaza. Nginakiwe
Uyesaba ukulahlekelwa ukunakwa kwabanye futhi umhawu wakho awunamandla, kodwa ugcwele. Umyeni wami usebenza kanzima ngaso sonke isikhathi, "awubali", izinkanuko zesikhumba eziya kumngani, futhi "ukukulahla". Kukhona ukusola kuwe ukuthi ikhompiyutha nencwadi yomuntu othandekayo ibaluleke ngaphezu kwakho, ngoba akayikubuya. Ukuthethelela ngokocansi nje ukuthi uthethelela kalula, ikakhulukazi okusheshayo - uma ngemuva kokuphenduka, funga ukuthi "ungabe usaphinda, ngoba wena - okungcono kakhulu!" Futhi ukunakekelwa nokunakekelwa.
Njengoba kubonisiwe . Ukuthuka kumuntu onomhawu: "I-Kakon ingangenza mina, ngijabule kangaka, ngingabongi futhi ngingazibali izinto engizifunayo?" Kusuka ngaphandle, ngeke ubuke umhawu nhlobo. Kodwa eshaweni uvame ukuphoqa ukudumazeka komhawu.
Kunalokho kuyingozi . Ukuphikisana okuqhubekayo nendawo ezungezile. Uma unikeza umhawu onjalo entandweni, ubuhlobo buphuka kancane kancane hhayi nje kuphela, kodwa futhi buvele nje nabantu abajwayele.
Indlela yokucima . Chaza izizathu zendlela yokuziphatha komunye umuntu, wenqaba ngamabomu ukuthi "uhlose ukukunaka." Futhi uzothola iqiniso.
Ukuhawukela njengendlela yokuziqinisa. Wonke umuntu kufanele angithande kuphela
Abanye badinga ukukhishwa njalo kwexabiso labo. Futhi kubabuhlungu ukuba baqaphele ukuthi abanye abantu bafaka umuntu ngesinyathelo esiphakeme. Owesifazane onalo hlobo unomona lapho umyeni wakhe enesizotha nabanye besifazane. Unomhawu ngomuntu owayengumngane wakhe omusha ngaphambili, nakuba ejabulile emshadweni. Ungathanda umthandi amlangazelele kuze kube phakade. Unomhawu ngabaphathi kubalingani, umthengisi - kubathengi.
Njengoba kubonisiwe . Usizi: "Kuvela ukuthi ngibi!", Ukuhlupheka nokuzilahla. Ngokuvamile owesifazane onjalo ufuna ukuhleleka. Omunye uthathwa ukuze ahlukumeze abanye.
Kunalokho kuyingozi . Kwenza uzibe umgomo ongenakwenzeka: ukuphelela. Ngezinye izikhathi kubhidliza ubuhlobo nabanye ngenxa yemizamo yokwehlisa bonke.
Indlela yokucima . Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kusukela kwabesifazane abakhulu, futhi, amadoda ashiya, ukuphelela kuphazamisekile. Ukugcina umuntu uvumela kuphela okuhlukile kwethu. Uma umyeni wakho ehlala nawe, khona-ke uyakuthanda. Futhi ungumuntu omuhle kangakanani nge-cashier esitolo ... Awunandaba na?
Umhawu womnikazi. Mine! Ngeke ngikunike!
Unomhawu kuphela osondelene nabo - indoda, izingane, abazali - kulabo abahamba ngaphesheya kwalo mbuthano. Isibonelo, indoda - kumkhwekazi noma izingane - kuba abangane. Umhawu wakho ujulile futhi ubuhlungu. Umhawu ukusebenza, ukufunda noma ikhompyutha ongajwayelekile. Uyakwazi ukuthi umsebenzi womyeni wakho ngeke ususwe, futhi iphini lakhe elisha lisho nakakhulu. Ngokuvamile, unomhawu ngezinto ezedlule, kunzima kuwe ukuthethelela ukuphikisana ngokomzimba futhi isithunzi "sesithathu esingenakuqhathanisa" isikhathi eside embhedeni wakho.
Njengoba kubonisiwe . Ukuthukuthela nokumangalela okuvulekile. U-Tysama uyazi lokhu nawe, futhi kubonakala ngokucacile kwabanye.
Kunalokho kuyingozi . Okokuqala: ngokuthukuthela ngokweqile ungatshela, futhi kufanele uxolise, uphenduke. Okwesibili: izinsolo zokungabi nabulungisa kanye nezidingo zokuba nawe kuphela ngezinye izikhathi zikhuthazwa ngumlingani we-kizmen.
Indlela yokucima . Ngokwethembeka ukuvuma wena nabanye: "Yebo, nginomhawu!" Uma sivuma ngandlela-thile, kulula kakhulu ukuphatha lokhu. Kuwusizo ukuhlukanisa labo abanelungelo lomthetho lokuba nomhawu - umyeni kubo bonke abantwana abasha nezinye izihlobo.
Umhawu osolisayo. Ngibonise uthando lwakho
Ngokuvamile uhawukela umuntu obaluleke kunazo zonke kuwe, ngokuvamile umuntfu othandekayo, kaningi-ingane noma umama, ngezinye izikhathi umeluleki, umpheki. Awakholelwa ukuthi ubalulekile kuye, futhi ngaso sonke isikhathi uyamsola ukuthi udlala uthando, futhi uyakusebenzisa ezenzweni zakhe, amanga futhi azenza. Futhi wonke ukumomotheka kwekheli lakhe siqu kuqinisa izinsolo zakho.
Njengoba kubonisiwe . Ngesibindi futhi ngamathumba amade, kubonisa ukucasuka, ukusola: "Futhi kungani enomusa kangaka? Ushintshe? ", Futhi okudingekayo:" Qinisekisa ukuthi uyayithanda! "Ngokuvamile kuphelile ngesibindi esinobudlova obubonakala singathembi ngokuphelele.
Kunalokho kuyingozi . Izidingo eziqhubekayo zobufakazi obuningi besithando esivela kumyeni wakhe ("Ungaxoxani nabangani bakho", "phosa amathawula akho"), kusukela endodaneni yakho ("Ungayi eyunivesithi yangaphandle") ixoshwa kumfazi onjalo kuqala nangesibili.
Indlela yokuyeka . Umsebenzi akulula. Isiza ukulawula okuphelele ukuthi ungathini nokuthi ungathini. Futhi isikhumbuzo sakho njalo mayelana nokuthi kulula kanjani ukucasula omunye ngokungathembi futhi ulahlekelwe kuze kube phakade.
Uma umyeni ephuza
Indlela yokusinda ekukhawulweni komuntu othandekayo
Ingabe kufanelekile ukuhlukunyezwa komyeni wakhe
Ukuqonda kanjani ukuthi umthandi ngeke ahlukane?
Imiphumela yombhalo weholide
Ukuba khona kwendoda yenkosikazi esandleni?
Indlela yokuyeka njalo ngenyanga: imithi kanye namakhambi asekhaya
Ukuvimbela izifo zesimiso senhliziyo
Recipe for pizza nge ushizi
I-Cottage ushizi lemonon donuts
Imithetho yokuheha, noma yini esiyifuna ngempela ukuthola "ubuso" bobulili obuhlukile?
Yakha ubuhlobo nendoda engathandeki